I-FREEFORM IZISA ISAMBATHO ESIMANGALISAYO KUNYE NEDAGGER KWITV - INGUBO KUNYE NEKRELE
Kwakudala Kwi Hollywood
Uphuhliso Lwe-App Kunye Nee-Condiments
Ihashe La Elincinci
I-Freeform yokuzisa i-Marvel's Cloak kunye ne-Dagger kwiThelevishini
Ndiyintshatsheli yamaqela amancinanana asemagqabini ahlekisayo, ke le yindaba ezamkelekileyo! IFreeform, eyayisakuba luSapho lakwa-ABC, iya kuzisa iingqwayi-ngqwayi zentsha iCloak kunye neDagger kwiTV.
Isinxibo kunye nekrele uza kuza kumabonwakude kuthotho lwamanyathelo asebenzayo ajolise kubantu abadala abancinci. Njengoko unokwazi kumahlaya, uTyrone Cloak Johnson kunye noTandy Dagger Bowen bayimveliso epheleleyo yee-1980s - zaziswa nge UPeter Parker, uMntu oBalaseleyo weSigcawu ngo-1982. Ababalekayo abadibana ezitalatweni zeSixeko saseNew York, bafumana amandla abo emva kokuba banyanzelwe ngenkani i-heroin yolingo (ngeminyaka yoo-1980 yonke yayimalunga nokuthi Yithi Hayi nje kunye neMfazwe yeziyobisi, ke yonke into yayi malunga nokufumana abantwana iziyobisi ezingekho mthethweni!) Ngusokhemisti owayevavanya imveliso yakhe kubantwana ababalekileyo. Kumahlaya amatsha, bebesele bezitshintshile kwaye ichiza livuse nje amandla abo okuguqula okufihlakeleyo.
I-duo emva koko i-1) yaqala ukuthandana, kunye ne-2) yagqiba kwelokuba ilwe ulwaphulo-mthetho, ijolise kulwaphulo-mthetho lweziyobisi kunye nokunceda abantwana ababalekayo. Isinxibo sinxiba isambatho esinegama elifanayo ukufihla inyani yokuba ngokusisiseko ulilize lomntu, okwaziyo ukugubungela nokukhusela (okanye ukugwinya) nantoni na kuye. Ngeli xesha i-Dagger ikhanya ngokukhanya okumhlophe okukhanyayo kwaye inokudubula ukukhanya kwabantu (okt: iincakuba). Indlala yengubo yancitshiswa kukukhanya okuqaqambileyo kukaDagger, yiyo loo nto benamathelene-nangona kunjalo, bekukho iingxelo zamabali apho sibona iziphumo zokuhlukana kwabo.
Sibabonile nge-Spider-Man, i-X-Men, kunye ne-Runaways. Ngoku, bafumana umboniso wabo, kwaye andinakonwaba! Akukho mbhali uqhotyoshelweyo okwangoku, kodwa ngokwe-io9 , umboniso uzakugxila kwezothando phakathi kukaTyrone noTandy, ochazwe 'njengolutsha olufikisayo olunemvelaphi eyahluke kakhulu' 'oluzifumana lusindwa kwaye luvuselwe amandla amakhulu asandula ukufunyanwa ngelixa bethandana.'
Kuyakupholisa ukubona ukuba yeyiphi inyathelo eliphilayo, i-YA Marvel show nokuba ijongeka kanjani. Kupholile nangoku ukuba abaphulaphuli be-YA baya kufumana ibhinqa kunye ne-superhero eyindoda emnyama ngaxeshanye . Oku kuya kuba kuhle!
(umfanekiso ngeMarvel Comics)
ngomatshi wama-31 weepaki kunye ne-rec
Ixesha lokudubula kwe-cherry inyanga
ixilongo ngoyena mongameli umthiyileyo
ilivo lexesha lekora 1 lokuphindaphinda
Brie larson amadoda amhlophe acaphula
I-hamilton 360 ilinde